Ny momba an'i Ipamorelin
1. Inona no Ipamorelin?
2. Ipamorelin ho antsika ve?
3. Top Ten Benefits of Ipamorelin
4. Ahoana no tokony hampiasa Ipamorelin?
5. Ipamorelin mpampiasa User: Tsy mitovy amin'ny olona manaraka aho
6. Mety hisy vokany amin'ny Ipamorelin
7. Torohevitra momba ny fividianana Ipamorelin
Ipamorelin (170851-70-4) dia zava-mahadomelina izay manentana ny vatanao hamokatra hormones fampiroboroboana voajanahary ary manampy anao hahatratra ny tanjonao. Ny hormonina mitombo (GH) dia miteraka amin'ny voan'ny pitipoa izay indraindray mety hahomby na mamokatra hormones amin'ny ambany. Ipamorelin dia mandrisika ny famokarana hormonina fitomboana amin'ny fomba roa. Voalohany, ny fampijaliana dia mampitombo ny hormonina voajanahary GH izay mampitombo haingana any amin'ny sekretera avo lenta.
Faharoa, ipamorelin dia manakana ny hormone somatostatin izay manakana ny famokarana hormonina mitombo ao amin'ny vatanao. Ankoatra ny famerana ny hetsika somatostatin ao amin'ny vatanao, ity zava-mahadomelina ity dia manala ireo sakana rehetra manakana ny famokarana voa voajanahary ny hormonina vokariny ary manatsara ny fatran'ny hormone vokatra.
Tsy toy ny GHRP-2 sy GHRP-6, ny Ipamorelin dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny sehatra ghrelin ao amin'ny rafitra vatanao. Midika izany fa tsy hahatsapa ny fitomboanao amin'ny fialan-tsasatra izay zavatra tsara ianao indrindra indrindra ho an'ireo izay mampiasa ny vokatra hanampy azy ireo hamoy ny vatana ary hihazona ny lanjany. Ankoatra izany, ireo izay mandray an'i Ipamorelin ho toy ny vokatra fanoherana ny fahanterana dia manampy azy ireo hitazona sy hijery tanora kokoa. Ny zava-misy dia mamporisika ny vatanao hampiroborobo ny hormonina izany, midika izany fa tsy misy ny fanakatonana ny famokarana voajanahary GH toy ny tranga miaraka amin'ny fitantanana HGH.
Ipamorelin dia mitarika ny famokarana hormonina mitombo amin'ny fomba iray izay mitovy amin'ny fomba famokarana voajanahary ary mitarika amin'ny famokarana tsy tapaka ity hormone tena ilaina ity. Ankoatr'izay, ny dingana dia midika fa ny dokotera dia mampihetsi-boka anao amin'ny voka-dratsiny kely raha ampitahaina amin'ny hormone hafa mampitombo ny fanafody. Ipamorelin dia mamorona pulsau be dia be ho an'ny famokarana ny GH mandritra ny fotoana lava izay miteraka ny haavonan'ny GH mandritra ny ora 3 aorian'ny fitsaboana azy.
Ny fampitomboana ny hormonina amin'ny fitomboana dia mazava ho azy fa toy ny hevitra tsara, ary mety ho izany indrindra no andrasanao amin'ny fanatanterahana. Na izany aza, ny zava-misy dia mitoetra fa ny fampiasana ny fanafody dia manosika ny vatanao mba hamokatra HGH bebe kokoa hanampy anao hahatratra ny tanjonao. Ny Ipamorelin miaraka amin'ny fihinanana sakafo sy ny fanatanjahantena dia hanana anjara asa manan-danja amin'ny fanampiana anao hanatratrarana ny tanjonao.
Rehefa mampiasa io zava-mahadomelina io ianao, dia tokony ho takatrao fa samy hafa ny vatan'olombelona ka tsy manantena ny valiny marina toy ny nataon'ilay namanao taorian'ny fampiasana Ipamorelin. Ohatra, ireo atleta izay miasa tsy tapaka dia mety hiaina fiantraikany tsara kokoa noho ny olona be loatra izay tsy manelingelina ny hanao fivoriana fanatanjahan-tena. Izany dia midika fa ny antony sasany dia hamaritra ny karazana vokatra ho azonao aorian'ny fampiasana Ipamorelin toy ny vatanao, ny fahasalamana eo amin'ny hafa. Ny sasany amin'ireo vokatra azo antenaina amin'ny fampiasana io zava-mahadomelina io dia ahafahana manatsara ny vatan'ny musculaire, ny fahazoana hozatra mamy ary ny fandoroana ny vatana.
Ara-dalàna, Ipamorelin (170851-70-4) dia tsy amidy amin'ny fandaniana olona fa fikarohana ara-pitsaboana. Na izany aza, aorian'ilay fisehoan-javatra fa mety hampiasa zava-mahadomelina raha ampiasain'ny olona, ​​dia nanomboka nampiasa izany ny olona, ​​ary maro ankehitriny no mankafy ny tombontsoany. Matetika ny lalàna dia miovaova amin'ny governemanta ho an'ny iray hafa, ary mamporisika anao izahay hanamarina ny toeran'ny lalàna momba ny fitsaboana eto amin'ny fireneny momba io zava-mahadomelina io. Fa ny dokotera dia afaka manampy anao hividy ny zava-mahadomelina, na koa azonao jerena ao amin'ny sehatra an-tserasera. Na mora toy inona aza ny mahazo ny fanafody, ataovy azo antoka fa hitarika anao amin'ny dokotera manontolo ny dokotera mba hisorohana ny loza ateraky ny vokany ratsy.Ny Fahamarinana tokony ho fantatra alohan'ny fampiasana MK-2866 (Ostarine)
Izany fanafody izany dia azo ampiasaina amin'ny atleta, bodybuilders, ary olon-kafa izay manana hormone kely kely. Ny asa Ipamorelin fototra dia ny hamporisihana ny famokarana hormonina mitombo ao amin'ny vatana. Ny hormonina mitombo dia misy fiantraikany amin'ny vatana manontolo, izany hoe ny ampahany amin'ny vatany sy ny vatany dia hianjera amin'ny fitomboany. Nilaza ihany koa ny mpahay siansa fa afaka manampy atleta sy mpanao bakteria ny fampidirana zava-mahadomelina mba hampivelatra ny hozatry ny foza. Noho ny fahafahan'ny zava-mahadomelina mitaona ny fitomboan'ny vatana rehetra, ny sasany dia mampiasa ny rongony ho fanafody manohitra ny fahanterana.
Amin'ny lafiny iray, ny fisian'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana dia mampitombo ny fatran'ny metabolista izay manampy ireo atleta sy mpandoro biby mba handoro ny tavy be loatra. Amin'ny famotehana sy ny famokarana dia mety hanampy ny atleta mandritra ny dingan'ny fitsaboana izay ahafahan'ny tavy manamboatra ny tenany. Ny hormonina mitombo dia mitana anjara toerana manan-danja amin'ny fitomboan'ny vatana izay mahatonga izany Ipamorelin for bodybuilding mangataka hitsangana.
3. Top Benefits 10 Ipamorelin
Hatramin'izao, Ipamorelin no misongadina ho ny lehibe indrindra sy ny peptide farany indrindra amin'ny orinasa. Ny zava-mahadomelina dia heverina ho anisan'ireo GHRP vitsy izay azo antoka indrindra ary ny Gim Stimulator mifantina. Ny mpampiasa an'io zava-mahadomelina io dia nitatitra tombontsoa samihafa izay horesahintsika eto ambany. Ipamorelin hatramin'ny nanombohany ny fivoarany dia nijanona ho malaza noho ny vokatra atolony ao amin'ny vatana. Raha ny marina, eo anivon'ny rehetra pitsaboana, ity zava-mahadomelina ity dia mbola tian'ny ankamaroan'ny mpandidy biriky sy atleta ary mpampiasa hafa mampiasa azy io ho toy ny vokatra fanoherana ny fahanterana. Ireto ny sasany amin'ireo tombontsoa Ipamorelin mahazatra;
Manampy amin'ny fandoroana fatim-bovoka be loatra - ny fitomboan'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana dia miteraka ny fampitomboana ny metabolisma izay manampy amin'ny fandoroana ny tavy ao amin'ny vatana. Na izany aza, dia mety hisy vokany tsara ny zava-mahadomelina raha toa ka misy fiaraha-miasa sy sakafo ara-dalàna mifanaraka amin'izany. Ohatra, ho an'ireo atleta na mpanao biriky izay mavitrika amin'ny fikarakarana dia hahita vokatra tsara izy ireo raha oharina amin'ireo mpampiasa hafa izay tsy mahomby. Noho izany, asa kely na fampiofanana dia mety ho fanampiny fanampiny amin'ny dosage ho anao mankafy ny tombontsoa Ipamorelin.
Mampitombo ny fitomboan'ny hozatra - na dia tsy natao ho an'ny sokajy anabolic steroide aza io zava-mahadomelina io, dia hita fa mahomby amin'ny fanampiana atleta sy ny mpiangona maro kokoa hampitombo ny hozatra tena ilaina. Ny hormonina fampiroboroboana no tena mpandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny vatana ao amin'ny vatana, ary anisan'izany ny hozatra. Amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy, dia mihalava ny hozany, ary manampy amin'ny fanamboarana azy ny hormonina mitombo.
Amin'ny farany, ny mpampiasa dia hihena kokoa ny fanaintainana rehefa mitombo ny hozatra. Ny fandroahana ny tavy be loatra dia hanome toerana ho an'ny fampandrosoana ny hozatry ny foza. Ny bodybuilder tsirairay dia mifantoka amin'ny fahazoana ny hozatry ny foza ary hahazoana ny endriky ny vatana. Ny ankamaroan'ny mpampiasa Ipamorelin izay atleta maro no nanintona ny fitomboan'ny hozany amin'ny zava-mahadomelina.
Ny fanentanana kely amin'ny fitsaboana kely - raha oharina amin'ny GHRP-6 izay fantatra amin'ny fampitomboana ny haavon'ny hanoanana, dia misy fiantraikany ratsy eo amin'i Ipamorelin amin'ny fanentanana ny fiankinan-doha. Betsaka ny mpampiasa GHRP-6 no mitaraina noho ny fitenenana manatsara kokoa izay mahatonga azy ireo ho sarotra aminy hijery ny lanjany na handoro ny vatana mihitsy aza. Na dia izany aza, ny fampandrosoana an'i Ipamorelin dia efa fitahiana ankehitriny satria tsy mila manahy ny lanjany intsony ny mpampiasa. Tsy mampitombo ny filan'ny rongony ny zava-mahadomelina, ary izany dia mahatonga azy ho ampy tsara amin'ny famolahana faribolana.
Tombo kokoa ny torimaso - ny ankamaroan'ny mpisera Ipamorelin dia nitatitra fa mahazo matory tsara sy matory rehefa mandray io fanafody io. Ho an'ny bodybuilder izay manana fotoana matory noho ny tsy fahasalamana vokatry ny ankamaroan'ny steroids ampiasain'izy ireo dia afaka mahita fialofana any Ipamorelin izy ireo. Ny fitsaboana dia mamela ny vatanao haingana kokoa noho izany rehefa avy avy amin'ny fiofanana izay mahatonga anao ho mora hatory ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, ny medikaly dia mety ho fanafody lehibe ho an'ireo marary tsy manana aretina. Na izany aza, ilaina ny manatona dokotera foana alohan'ny handraisana io zava-mahadomelina io.
Mitadiava fomba fijery tanora ho an'ireo mpampiasa - Ipamorelin dia fantatra ho iray amin'ireo vokatra mahery vaika manohitra ny fahanterana, ary maro ireo mpampiasa no maniry izany amin'ny fikatsahana ny hijanona tanora. Ny hormonina mitombo dia manana fiantraikany lehibe amin'ny fanarenana ny hoditra. Io fanafody io koa dia manampy amin'ny fanesorana ny hoditra eo amin'ny hoditrao ary manampy ireo mpampiasa hahatratra ny hoditra malefaka sy tanora. Ny hormones mitombo dia manavao ny sela hoditra sy ny tavy organika amin'ny fanesorana ireo teboka rehetra eo amin'ny hoditra. Manampy ny fanasitranana amin'ny hoditra koa izy raha toa ianao ka misy maratra vokatry ny ratra. Ny zava-mahadomelina koa dia manampy ireo vehivavy mpampiasa hampivelatra ny fantsika sy ny volony, ka manatsara ny hatsarany.
Manatsara ny famokarana kôlagen - Ipamorelin dia nampiavaka ny fanampiana maro mpampiasa mba hanatrarana ny hoditra malefaka sy ny endrik'izy ireo. Ny ankamaroan'ireo mpampiasa zava-mahadomelina dia nitatitra fa nahatratra tanora mijery hoditra taorian'ny nandehanany ny fitsaboana Ipamorelin nandritra ny enim-bolana. Na izany aza, ireo vokatra ireo dia tsy hita afa-tsy amin'ireo mpampiasa misy ny tsy fahampian'ny hormone. Ankoatra izany, ny zava-mahadomelina koa dia manome fahafahana ny mpampiasa haniry volo matanjaka, matevina ary salama.
Manamafy ny votoatin'ny vatan'ny mineraly - ankoatra ny fahafaha-manavao, ny Ipamorelin dia manatsara ny lanjan'ny taolana sy ny fanohanana iombonana, ka manatsara ny fahamendrehan'ny mpampiasa. Ipamorelin koa dia manatsara ny hery ara-batana manontolo sy manatsara ny rafitra fiarovana anao. Ny zava-mahadomelina dia vahaolana ho an'ny filan'ny angovo rehetra ao amin'ny vatanao.
Manara-maso ny tosidra - matetika ny olona manana fatran'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatany, mahatsapa ny fiakaran'ny tosi-drà ary tena mahazatra amin'ny zokiolona. Ipamorelin therapy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanaraha-maso ny olana ary mitazona aretina hafa avy amin'ny fo. Ny zava-mahadomelina izay mandrisika ny famokarana hormonina amin'ny fitomboan'ny olombelona izay mitazona ny fo sy ny fantson-tsoan'ny marary.
Mampitombo ny famokarana insuline - ny tsy fisian'ny insuline ao amin'ny vatana dia miteraka diabeta, ary izany no olana atrehin'ny olona maro manana traikefa hormone. Ny fitsaboana Ipamorelin dia manampy amin'ny fihazonana ny hormonina amin'ny fitomboan'ny olombelona amin'ny ambaratonga takiana, ka miteraka ny famokarana insuline ary koa ny fanatsarana ny salasalan'ny vatana. Ireo marary diabeta izay efa nahazatra ny fitsaboana Ipamorelin, dia mitatitra fanatsarana lehibe ao anatin'ny fotoana iray.
Ny vahaolana amin'ny fiterahana - ny fiterahana dia manondro ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana. Noho izany, ny fampiasana Ipamorelin dia hanampy anao hanatsara ny fihetsiky ny vatan'ny anabolic sy ny metabolism. Amin'ny farany, ny fihetsika dia miteraka fahabangana ary manampy anao hahatratra vatana salama sy malefaka. Ny zavatra tsara amin'ny Ipamorelin dia tsy manandratra ny fiankinan-doha ary tsy hampiana lanja fanampiny amin'ny vatanao ianao raha mampiasa io fanafody io.
Ny Ipamorelin dia misy amin'ny vovo-poitra maina, saingy tokony haverina ao anaty rano bacteriostatika alohan'ny hanombohanao azy io. Aorian'io dingana io dia tsy maintsy apetraka ao amin'ny efitranony ny zava-mahadomelina hanala azy. Ny fitsaboana dia tokony ho voaomana tsara alohan'ny fitantanana azy amin'ny alalan'ny fampidirana na amin'ny alalan'ny metkin-dite an-doha na tsiambaratelo.
Maro ny olona mahita ny SubQ ho toy ny tiany indrindra satria nomena 2 hatramin'ny 3 isan'andro. Ampiasao mandrakariva ny fitsaboana kely amin'ny insuline mba hikarakarana an'io fanafody io. Raha ny marina, tsy azonao antoka ny fomba hanosehana ny tenanao, ary araho tsara ny mpitsabo amin'ny fahasalamana mba hanao ilay fitaka. Indraindray ny tsindrona tsy ara-traikefa dia mety hitarika fahasemporana ara-pahasalamana izay mety hisakana ny fivoaranao. Ny dokotera dia afaka mampiofana anao amin'ny fomba handehanana amin'izany; Aorian'izay, dia hampionona ny fampiharana mora foana ianao.
(1) Iza no afaka mampiasa Ipamorelin?
Ipamorelin dia fanafody mamporisika ny famokarana Hormonal growth ao amin'ny vatanao. Noho izany dia azo ampiasaina amin'ny olona rehetra izay mahatsapa ny tsy fahampian'ny herin'ny famokarana hormonina. Ireo atleta koa dia mampiasa ny rongony mba hanampy azy ireo hanatsara ny haavon'ny HGH ao amin'ny vatany ary hahatratra ny tanjony. Raha fintinina, ny zava-mahadomelina dia ampiasain'ny olon-tsotra noho ny antony samihafa.
Ohatra, ny mpanao fampiasam-batan'olona dia mampiasa izany mba hanatsarana ny fanarenana haingana sy ny fantsom-batana aorian'ny fampiasana enta-mavesatra ary koa mba hanampiana azy ireo hahatratra ny hozatry ny foza. Ny hafa dia mampiasa azy io toy ny vokatra fananganana fananganana fananganana raha toa ka mampiasa azy io ny mpampiasa sasany mandritra ny famoahana azy. Raha mijery ny tombony avy amin'ny zava-mahadomelina etsy ambony, dia ho hitanao fa ny zava-mahadomelina dia tena zava-mahadomelina ao amin'ny sehatry ny fahasalamana, satria manampy ny marary mijaly amin'ny diabeta, ny tosidra ambony, ary ny fidiram-bolan'ny vatana.
Ny fatra isan'andro nomena ity fanafody ity dia avy amin'ny 200-300 mcg izay tokony alaina matetika amin'ny fanaon'ny 2-3 isan'andro. Ny mpampiasa sasany dia aleony mampiasa ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny singa hafa amin'ny famoahana horonantsary mitombo hahazoana vokatra tsara kokoa. Ny fe-potoana farany ambany dia tokony ho herinandro 8, saingy afaka manitatra izany amin'ny herinandro 12 raha tsy mahita vokatra ianao. Ampahafantaro ny dokotera anao anefa ny fivoarana na ny vokatr'izany aorian'ny fanafody. Sarm RAD140 (Testolone) Niteny ny mpampiasa: Fanamarihana, Ampiasao ireo dingana, Fahasahiranana
Ny rafitra ataon'ny olombelona dia tsy mitovy mihitsy; misy olona afaka Ampiasao Ipamorelin ary hahita vokatra tsara kokoa raha toa ka diso ny zavatra rehetra. Mamporisika mandrakariva ny mpanjifanay handalo fitsaboana alohan'ny handraisana ny zava-mahadomelina. Ny dokotera ihany koa dia tokony hanoro ny dosage mety araka ny zavatra ilainao sy ny fahasalamanao.
Ho an'ny mpampiasa vaovao, tsara ny manomboka amin'ny alàlan'ny fanangona iray ampitomboina isan'andro ary miantoka ny fandraisanao azy io amin'ny fotoana iray isan'andro. Ny fampiroboroboana dia mandrisika ny hanomboka amin'ny dosia ambany mandritra ny valo herinandro eo ho eo, fa ny dokotera kosa dia afaka manomboka amin'ny herinandro 12. Aorian'ny fitsaboana ara-pitsaboana, ny dokotera dia hamaritra ny tsara indrindra ho anao sy ny tsingerina mety.
Ny dokotera dia afaka mampitombo ny dosage aorian'ny fampiasana azy mandritra ny fotoana fohy na aorian'ny dingana voalohany. Na dia izany aza, tsy fiantohana ny hahazo ny vokatra irinao, fa hanampy anao hahazo ny tsara indrindra avy amin'ny zava-mahadomelina ihany. Amin'ny fiafaran'ny Ipamorelin cycle Tokony hiaina farafaharatsiny ireto vokatra manaraka ireto ianao;
Manatontosa ny fitomboan'ny hozatra ary mampihena ny haavon'ny voa
Manandrana ny fanatsarana ny haavon'ny angovo entinao, izay karazan'ny atleta maro rehefa mampiasa io fanafody io.
Ny hormonina amin'ny hormonina amin'ny fitombon'ny olombelona dia tokony hitombo araka ny tokony ho izy satria ny rongony dia mandrisika ny vatanao hamokatra HGH bebe kokoa. Hahazo tombontsoa hafa koa ianao, toy ny hormonina mitombo amin'ny fitomboana, hampitombo ny hoditra mahafinaritra, sy ny fanjavonan'ny kankana na ny marary amin'ny hoditrao.
Na inona na inona vokatra tadiavinao amin'ny faran'ny vanim-potoana dia ny tombony ho an'ny hozatra, ny fahavoan'ny lanjany, ny hozatry ny fo, na ny hanatsarana ny hormonina mitombo ao amin'ny vatanao, aza manandrana mampitombo na mampihena ny dosage eo afovoany amin'ny tsingerina. Tsara ny mitazona ny tahan'ny diplaoma mandra-pahavitanao ilay tsingerina. Ny fampitomboana ny dosage dia mety miteraka vokatra miiba ary tsy manantena valiny ho an'ny Ipamorelin ianao.
Raha misafidy ny hitondra an'io zava-mahadomelina io ianao, dia tokony ho azonao antoka fa manosika azy amin'ny rafitra vatanao amin'ny fomba mahazatra. Ny fanovana ny dosages isaky ny fotoana, na ny fanovana ny dosage fotoana, dia mety tsy hahatratra ny tanjona ianao. Ho anao hahatratra ny valin'ny Ipamorelin fara-fahakeliny, mila miantoka ny haavon'ny dosage tsy miova mandritra ny tsingerina ianao ary mandray ny dosages amin'ny fotoana iray isan'andro. Tena fotoana manan-danja ny fandaharam-potoana, miovaova izany dia hisy fiantraikany eo amin'ny ambaratonga fanampiny ao amin'ny vatanao. Izany dia hampisongadina anao amin'ny voka-bary faran'izay kely.
Ankoatra izany, dia ento ny fampidiran-tsainao rehefa iray minitra alohan'ny hisakafo dia fomba iray hafa tena ilaina mba hahazoana antoka fa mikoriana tsara ao amin'ny rànao. Alohan'ny hanombohanao ny dosage dia aza misalasala manontany amin'ny dokotera anao fanontaniana momba ny zava-mahadomelina. Ny fampiakarana ny ahiahinao alohan'ny fotoana na mandritra ny famadihana ny Ipamorelin dia hanampy amin'ny fanamafisana ny vokatra.
(4) Fampiasana hafa an'ny Ipamorelin
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy fomba siantifika azo ampiasaina amin'ny fomba mahazatra hampiasa ity zava-mahadomelina ity. Ohatra, raha ampiasaina indroa isan'andro isan'andro ny dosie 500-1000mcg, dia ho kely kokoa ny tsingerina ary handeha mandritra ny herinandro 8 herinandro. Amin'ny lafiny iray, ireo atleta miofana amin'ny fifaninana ho avy dia afaka mitondra ny dosie 3 amin'ny dosage 300-500mcg mandritra ny herinandro 12. Mpampiasa vaovao izay ampirisihina handeha amin'ny dosage ambany, mahita dosage mcg 300 avo loatra ho azy ireo ary indraindray ireo mpitsabo dia mampihena azy amin'ny 200 mcg amin'ny herinandro 8 ho an'ny rafi-kodiny mba hampiasaina amin'ny fanafody.
Ny mpampiasa Hardcore Ipamorelin dia afaka mandefa dose avo nefa tsy misy fiantraikany ratsy hafa. Na izany aza, dia tena mampidi-doza ny dose avo ho an'ny mpandidy. Miankina amin'ny tanjaky ny vatan'ny olona iray, ny sasany mety hanomboka ny dingana kely kokoa noho ny mpiara-miasa aminy mba hahatsapany azy Ipamorelin valiny izy ireo dia maniry. Etsy andaniny, mpampiasa vaovao sasany dia hahatsapa ny vokany hafa na dia efa mandeha aza ny dosage ambany indrindra. Raha toa ianao ka mahatsapa izany, mifandraisa amin'ny dokotao avy hatrany mba hahitana vahaolana izay mety hampihenana ny dosage amin'ny farany na ny fikajiana ny cycles Ipamorelin.
Araka ny voalaza etsy ambony, tsy misy ny fomba fampiasana Ipamorelin ho lazaina fa mety na tsy mety. Misy karazana fampiasana mihoatra ny iray azonao atao ary mbola mahatsapa ny tombontsoa avy amin'ny zava-mahadomelina. Ianao no manapa-kevitra ny hampiditra ny fanafody ho toy ny fampiharana na ny sakafo. Na ny halehiben'ny dose Ipamorelin na ny tsiambaratelo dia ny tanjona farany hahatratrarana ny tanjonao.
Ho an'ny mpampiasa vaovao dia tsara foana ny manomboka amin'ny dosia ambany sy ny tsingerina fohy izay afaka mitombo amin'ny hoavy. Ny dingana dia manome fahafahana ny vatanao hanova ny toetr'andro sy handraraka ny Ipamorelin alohan'ny hampitombo tsikelikely ny dosage. Tadiavo ny torolalan'ny dokotera raha mila tanjona ianao aorian'ny famitana ny tsingerinao.
5.Ipamorelin mpampiasa mpampiasa: tsy mitovy amin'ny olona manaraka aho
Raha jerena ny fanamarihana Ipamorelin samihafa amin'ny sehatra samihafa, dia mazava fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia faly amin'ny vokatra niainany taorian'ny famaranana ny tsingerin'ny dosage. Ny mpanjifa dia manome tsikera hafa izay mahazatra amin'ny ankamaroan'ny vokatra. Ny mpampiasa sasany dia hitatitra foana ny valin'ny Ipamorelin positive raha toa ny hafa dia maneho ny tsy fahafam-pony. Ipamorelin dia mpandrindra hormonina mitombo ary manampy ny mpampiasa hahatratra tanjona samihafa eo amin'ny fiainany. Ohatra, ny mpanao fanatanjahan-tena sy ny bakteria dia mampiasa ny zava-mahadomelina mba hanampiana azy ireo hanatsara ny vatana manontolo sy hahatratra ny hozatry ny fo.
Mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fifaninanana, mila atleta ampy ny atleta izay omen'ny Ipamorelin - izay mahatonga izany zava-mahadomelina malaza amin'ny tontolo manerantany. Na izany aza, ireo atleta miaraka amin'ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny sakafo mahazatra sy ny fampiofanana tsara dia mahazo ny tombotsoan'ny Ipamorelin amin'ny farany. Ny zava-mahadomelina koa dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanampiana hafa ho an'ny fanatanterahana vokatra faran'izay betsaka.
Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia nanome ny Ipamorelin tamin'ny kalitao tsara indrindra ary nanome valiny tsara koa. Ohatra, maro ireo mpisera milaza fa ny rongony dia nanampy azy ireo hahatratra ny tanjony amin'ny tontolo manerantany. Ny hafa kosa manasongadina ny fihenan-tsainy amin'ny zava-mahadomelina. Bilaogera sasany no voalaza fa nilaza fa mampiasa ny Ipamorelin noho ny fahaverezan'ny fatotra izy ireo ary efa mahatalanjona hatramin'izao. Ny hormonina fitomboana dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny faritra maro ao amin'ny vatana, ary ireo izay mampiasa io zava-mahadomelina io dia azo antoka ny fitomboan'ny taovam-pananahana sy ny famerenana indray ny sela. Misy ireo mpisera izay nisafidy ity vokatra ity ho fanafody manohitra ny fahanterana, ary nanome vokatra tena tsara izany.
Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana, ny zava-mahadomelina dia tena ilaina amin'ny fanampiana ireo marary mijaly amin'ny diabeta, ny fiakaran'ny tosi-drà, ary ny aretina hafa amin'ny tsy fahampian'ny hormone. Ny siansa dia manaporofo fa ny tsy fahampian'ny hormonina mitombo eo amin'ny olombelona dia mitondra fahasamihafana sy aretina isan-karazany toy ny diabeta. Avy amin'ny fanamarihana Ipamorelin, ny ankamaroan'ny fanjakana mpampiasa dia nanatsara ny fahasalaman'ny foza.
Amin'ny lafiny iray, faly ny mpampiasa sasany fa ny Ipamorelin dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny famokarana insuline tao amin'ny vatana ary nanatsara ny fahasalamany taorian'ny fijalian'ny diabeta nandritra ny fotoana lava. Ny fahaiza-manao Ipamorelin amin'ny fanatsarana ny sela sy ny fanarenana ny vatosoa dia nidera an'ireo mpampiasa maro bebe kokoa koa ireo izay mampiasa azy io toy ny vokatra fananganana fananganana. Rehefa afaka volana maromaro ny fampiasana ny zava-mahadomelina, ny tatitra sasany momba ny mpanjifa dia nanomboka nanjavona ny ketsa sy ny bakteria amin'ny hoditra.
Tahaka izany ihany, ny mpampiasa Ipamorelin sasany dia tsy nanana fotoana mora ary mitaraina noho ny fahatsapany fa misy fiantraikany mahery vaika. Na izany aza, raha toa ka mampiasa Ipamorelin amin'ny dosage ambony ianao na tsy mandalo fitsaboana ara-pahasalamana, dia mety henjana ny vokatra hafa. Satria ny zava-mahadomelina dia niasa ho an'ny namanao, tsy mahazatra izany fa hanome ny vokatra azo avy amin'ny Ipamorelin ho anao ihany koa.
Samy hafa ny vatan'olombelona, ​​ary izany no antony mahatonga ireo mpampiasa sasany mitaraina mafy ny vokany. Ny fandraisana ny dokotera ao anatin'ilay dingana, ary ny famelana azy hametraka ny dosia mety ho anao dia ny hany fomba hisorohana ny fahatsapana ny vokatra hafa. Na dia izany aza dia misy fiantraikany kely eo amin'ny vatana, toy ny aretin'andoha, ary ny fanaintainana eo amin'ny sehatry ny atidoha saingy azo fehezina izany raha toa ka mampahalala amin'ny dokotera anao amin'ny fotoana.
6. Mety misy ny vokatry ny Ipamorelin
Ny Ipamorelin dia toy ny fanafody hafa raha tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy no mety hitondra vokatra hafa. Na izany aza, mba hampihenana ireo fiantraikany ireo, dia avelao ny dokotera mametraka ny dosia mety sy tsingerina. Ny olona sasany dia manao fahadisoana amin'ny fividianana ny zava-mahadomelina avy amin'ny sehatra aterineto isan-karazany ary manomboka mampiasa izany. Araka ny efa voalaza alohan'io dia ampiasaina amin'ny fikarohana momba ny fitsaboana ny zava-mahadomelina ary noho izany dia mety ho sarotra aminao ny mametraka ny dosia tokony ho anao. Ny zavatra tsara amin'ny zava-mahadomelina dia ny vokatra hafa dia somary sariaka raha oharina amin'ny hormone hafa mamporisika zava-mahadomelina. Na dia izany aza dia misy ny sasany amin'ireo vokatry iombonana iraisana amin'ny zava-mahadomelina;
Ny Ipamorelin dia tsy manana fiantraikany eo amin'ny sehatra hafa. Ny fampiasana Ipamorelin dia tsy mahatonga ny gynecomastia. Na izany aza, ny zava-mahadomelina dia mety miteraka ny fihazonana ny rano amin'ny fiandohan'ny vanin-taonanao ary ny faritra tena mora vidy dia misy tanana sy kitrokely. Mety hanjavona ny fitazonana ny rano aorian'ny fotoana indraindray fa raha mbola mitohy ny fampahalalana ny dokotera.
Amin'izao fotoana izao, tsy misy porofo na dokam-barotra androgenic effects of this drug. Izany dia midika fa tratran'ny trangam-pahaizana haingana vaky, fihenam-bidy na fanafody amin'ny mpampiasa vehivavy ny mpampiasa. Izany no mahatonga an'io GHRP io amin'ireo zava-mahadomelina azo antoka indrindra amin'ity sokajy ity.
Tsy misy ny fiantraikan'ny Ipamorelin amin'ny kanserôka, saingy maro amin'ireo mpampiasa zava-mahadomelina dia nitatitra ny fanatsarana ny fahasalaman'ny foza rehefa vita ny tsingerin'ny rongony. Ny rongony dia midera ny fanampiana ireo marary amin'ny tosidra ambony sy ny aretim-po.
Ity zava-mahadomelina ity dia tsy misy firaketana ny famongorana ny voa voajanahary ny hormones testosterone ao amin'ny vatanao. Ny Ipamorelin koa dia tsy misy fiantraikany amin'ny famokarana hormonina Luteinizing (LH) ary koa ny Fihetseham-pihetseham-pandaminana mihanaka (FSH). Ankoatra izany, dia misy fiantraikany ratsy eo amin'ny famoronana ny Hormone Hormone (TSH) ny fitsaboana.
Ny vaovao tsara dia ny hoe Ipamorelin dia tsy manimba na manamaivana ny aty anao na dia eo aza ny habetsaky ny doka azonao. Aoka ho avo lenta na ambany ny fitsaboana azo antoka ho an'ny aty. Na dia izany aza dia misy fiantraikany mahazatra ny sasany amin'ny maha-mpampiasa anao mety ho azonao, saingy azo ekena izany. Anisan'izany;
Herisetra izay marobe ireo mpampiasa no mitaraina kanefa azo vahana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny sakafo.
Fanaintainana sy fanaintainana eo amin'ny faritra fampidirana; Na izany aza, ny fihodinan'ny faritra fanenana dia ny vahaolana tsara indrindra amin'ity olana ity.
Ny làlan-doha, ity olana ity dia afaka ny ho voavonjy amin'ny fanitsiana ny sakafo, ary mety mila ny fanampian'ny dokotera na ny sakafo ara-tsakafo ianao.
Ny fampitomboan'ny prolactine ao amin'ny vatana izay tsy fahita matetika, fa raha mitranga izany, dia andramo ny mitady Cabergoline.
Ny ampahany mahasoa indrindra amin'ity zava-mahadomelina ity dia saika ny fiantraikany eo amin'ny vatana no azo fehezina raha ampahafantarinao amin'ny dokotera amin'ny fotoana. Miaraha amin'ny dosage amin'ny alàlan'ny fitsaboana ara-pahasalamanao mba ho eo amin'ny faritra azo antoka foana. YK-11 Cycle sy fanandramana avy amin'ny mpampiasa tena izy
7. Torohevitra hividianana Ipamorelin
Voarara ny tsena Ipamorelin mivarotra, ary ny mpanamboatra tsirairay dia nilaza fa hamokatra Ipamorelin tsara indrindra. Noho izany dia zava-dehibe ny mitandrina foana amin'ny fotoana rehetra, indrindra rehefa mividy fanafody toy ny fantsona hormone fampiroboroboana. Ipamorelin dia amidy amin'ny orinasa isan-karazany an-tserasera, fa mila manao fikarohana tsara ianao mba hahatakatra ny fomba fiasan'ny orinasa sy ny kalitaon'ny vokatrao. Azonao atao ihany koa buy Ipamorelin avy amin'ny famoahana avy any an-toerana
Ny vidin'ny Ipamorelin koa dia miovaova amin'ny orinasa iray amin'ny iray hafa. Mandehana any amin'ny orinasa mendri-kaja izay manana rakitsoratra tsara amin'ny famokarana vokatra tsara. Mitadiava fanamarihana samihafa Ipamorelin ary amaraho izay lazain'ny mpanjifa momba ny vokatra avy amin'ny orinasa. Na izany aza, ny dokotera dia afaka manampy anao amin'ny fametrahana ny Ipamorelin tsara indrindra manamboatra sy manome. Aza mianjera amin'izay Ipamorelin peptide Raha mivarotra anao manodidina anao ianao, tadidio fa ny zava-mahadomelina ihany no hanampy anao hahatratra ny tanjonao.
Na dia zava-dehibe aza ny teti-bola rehefa mandray fanapahan-kevitra hividy, ny Ipamorelin dia tsy tokony omena laharam-pahamehana noho ny kalitaon'ny vokatra izay efa novidinao. Ny ankamaroan'ny vokatra mendrika dia mora foana ny mandany ny mpanjifa. Na izany aza, tsy midika izany fa tokony handehanana amin'ny vokatra lafo indrindra ianao. Mifidiana orinasa iray izay manolotra zava-mahadomelina tsara amin'ny vidiny mety. Ny vidin'ny Ipamorelin dia miankina amin'ny habetsahan'ny rongony, ny fivarotana dosage 2mg amin'ny $ 15 ka hatramin'ny $ 25. Raha mila fampahalalana misimisy dia aza misalasala manatona anay, ary ny ekipa mpanampy mpanjifa dia hamaly ny fanahianao sy ny fanontaniana rehetra.
Isika no orinasa tsara indrindra azonao itokisana, ary ataonay foana ny entana avoakanay. Ny fotoana anaovanao ny baiko dia manomboka manamboatra izany avy hatrany ny ekipa mpamatsy antsika ary manao fandaharana momba ny fomba amam-panafody ao anatin'ny fotoana fohy. Afaka miditra mora amin'ny tranonkalanay ianao amin'ny findainao smartphone, solosaina na tablety ary mametraka ny baiko ao anatin'ny segondra vitsy. Ny fomba fandoavam-bola ataonay dia mora ihany koa amin'ny fanatontosana ireo mpanjifa rehetra mety.
Semenistaya, E., Zvereva, I., Krotov, G., & Rodchenkov, G. (2016). Fitrandrahana sarimihetsika kely amin'ny peptide bitika eo amin'ny cartridges sy ny microelution 96-takelaka tsara avy amin'ny fantsoman'ny olombelona. Ny fitsapana sy ny fanadihadiana, 8(9), 940-949.
Asa, HDT (2017). CJC-1295 Peptide Price & Dosage. Star.
Pinyot, A., Nikolovski, Z., Bosch, J., Segura, J., & Gutiérrez-Gallego, R. (2010). Momba ny fampiasana sela na membranes ho an'ny mpandidy: ny secretagogues hormone fampiroboroboana. Biochemistry, 399(2), 174-181.